Indlela efanelekileyo yokuthengisa i-Forex inokuphelisa umngcipheko wexesha elifutshane FXCC
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Indlela efanelekileyo yokuthengisa i-Forex inokuphelisa umngcipheko wexesha elifutshane
Igunya le-Alpha. Ibinzana livela kwi-shishini lotyalo-mali, ebonisa ukuba umthengi isandla ngaphezu kolawulo olupheleleyo kumphathi wakhe wemali, ukusebenzisa ingqiqo yabo, ukutshala imali nayiphi na indawo abayifanelekileyo, ngaphandle kwemimiselo. Nangona kunjalo, ibinzana ngokubanzi lichazwe ngokungaqondakaliyo, njengokuba akukho namnye kuthi oza kuzimela thina, okanye umphathi wemali, onokubeka umngcipheko yonke into kumqulu owodwa wedayisi, okanye enye i-wheel roulette, nokuba i-fifty fifty-fifty bet , obomvu okanye omnyama.
Umqhubi wesigunyaziso se-alphabe alpha usenomqobo wokusebenza ngaphakathi, abafuni ukudlala ngokungekho nto ngeefowuni zabaxhasi babo. Baya kusebenza phantsi kwemigaqo eqinile, ehloniphekileyo kunye negunya elivunyelweneyo, kodwa mhlawumbi baya kushukumisa imida yesicwangciso sabo sokurhweba, ukuba bafake inzuzo enkulu kwiindlela zabo zokurhweba. Le nkcazelo ebanzi ifanele ifake kwi-intengiso yethu yokuthengisa kunye nesizathu sokuba siza kubonelela inzuzo eseleyo etafileni kwaye kufuneka sizenzele ngokukhawuleza kwaye sifunde ukuba kutheni inzuzo yokungaphumeleli ingafanele ililele.
Abo bacinga ngenzuzo yokungaphuthelwa ngokuqhelekileyo baninzi abahwebi, abangeke bavumelane nelokuba imarike iya kuhlala ikhona, kuya kubakho elinye ithuba lokuthengisa kunye nenzuzo. Nangona kunjalo, ukuba isicwangciso sakho sokurhweba siphumelele, ngaphezu kwexesha elide ukuya kwixesha elide, kufuneka uvume ukuba awukhethi kuphela ukuba ungayisebenzisi ukuyeka, kufuneka usebenzise imiyalelo yokukhawulela inzuzo kunye nobume kunye nenkcazelo yabo, Ndiza kunciphisa inzuzo yakho.
Ukunciphisa inzuzo yakho yinkcazo enembile kunye nencamango, kuba kutheni sinokuwukhawulela inzuzo yethu, kutheni kungenakulinganiswa? Sinciphisa inzuzo yethu kuba siziva ngokukhawuleza ukuba ngelixa ixesha elide linokuthi lichongwe ngamacandelo amancinci nakwi-macro-economic factors, ukunyakaza kwe-intraday, ngezinye izikhathi isandi esingenangqungquthela, sinokuchaphazela ngokubanzi umgangatho wethu kunye nenzuzo enokuthengwa nganye. Ngoko ke, sinokudityaniswa nobudlova, kodwa ngokufanelekileyo; Sijolise ekuphumelelweni kokulahlekelwa kwemali ye-2: 1 kwaye sinomngcipheko mhlawumbi i-0.5% ye-akhawunti yethu, ukufumana i-1%. Senza oku ngenxa yokuba imbali isifundisa ukuba iinjongo ezinqabileyo ziya kutshabalalisa iakhawunti yakho ngokukhawuleza.
Kukhona olunye uhambo olululingayo lwengqondo olulungele ukucamngca xa ubona ubungqina bentengiso yeebini uqikelele indlela esilungileyo ngayo, uthathe inzuzo yakho ngenxa yokuthatha inzuzo yakho, kodwa umzila uqhubeka ngokukhawuleza, ubeka inzuzo enkulu enokuba zifakwe.
Khumbuza kuqala; ukuba ulungile kwaye unelungelo lokubhanka inzuzo njengenxalenye yesicwangciso sakho sokurhweba. Sibini; qaphela ukuba i-spikes ayifumaneki kwishishini. Okwesithathu; ukuba kuya kuthi, njengobusuku bulandela usuku, mazibuyisele emuva (ixesha apho kuya kuba nzima ukuqikelela). Kwaye ekugqibeleni, ngoku usenokwenzelwa loo mini; mhlawumbi umise iqonga lakho ukuba uthathe urhwebo, lisebenza, uye wabhawula inzuzo yakho, kwaye unesimo esihle ukuthengisa kwakhona ngosuku olulandelayo. Usebenze njengengcali epheleleyo, ukugcina indlela yakho yokuqeqesha phambili ekuthengiseni, ukwenqaba ukonakalisa isicwangciso sakho sokurhweba, ngenxa yengozi yesikhashana.